खसीबोका आयात बढ्यो - Karobar National Economic Daily
खसीबोका आयात बढ्यो
query_builderSeptember 24, 2017 9:47 AM supervisor_accountमनोरञ्जन शर्मा visibility239
भैरहवा: भैरहवाको बेलहिया नाकाबाट दसैंमा अत्यधिक खपत हुने खसीबोकाको आयात बढेको छ । मासु प्रयोजनका लागि खसीबोका अधिक प्रयोग हुने गरेको छ । रेड मिटका रूपमा खसीबोकाको मासु चिनिने भए पनि हरेक वर्ष यसको आयात बढिरहेको हो ।
बेलहिया नाका हुँदै आयात हुने खसीबोका प्रायः रूपन्देहीमै खपत हुने गरेका छन् । कतिपय खसीबोका काठमाडौं, चितवन, पोखरातर्फ पनि पठाउने गरिएको पाइएको छ । त्यस्तै कृष्णनगर नाकाबाट अहिले बेलहिया नाकाबाट भन्दा पनि अधिक खसीबोका आयात भएका छन् ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को साउन र भदौको तुलनामा चालू आवको पहिलो दुई महिनामा खसीबोका आयात बढेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत गोपाल भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा ११ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँबराबरका १८ हजार ७ सय ३७ वटा खसीबोका आयात भएकोमा चालू आवको दुई महिनामा १२ करोड ८८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मूल्यका २१ हजार १ सय १५ वटा आयात भएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी गत आवको पहिलो दुई महिनामा ३ लाख १७ हजार ८१ किलो माछा आयात भएको थियो, जसको मूल्य ४ करोड २६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थियो भने यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८ करोड ७७ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको ५ लाख ४३ हजार ९ सय ६२ किलो माछा आयात भएको सूचना अधिकृत भट्टराईले बताए ।
अन्य समयमा भन्दा चाडबाडका बेला अत्यधिक खपत हुने खसीबोका र माछाको आयात बढेको हो । असोजको पहिलो पाँच दिनमा २ हजार ३ सयभन्दा बढी खसीबोका आयात भइसकेको छ ।
नाकाबाट आयात हुने सबै खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको छ । यो नाकाबाट आयात भएका खसीबोकामा कुनै समस्या नदेखिएको पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट बेलहियाका अधिकृत डा. प्रवेश शर्माले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा यो नाकाबाट कुल ५२ हजार ७६ खसीबोका आयात भएको थियो, जसको मूल्य ३० करोड ७२ लाख ७२ हजार थियो । त्यस्तै गत वर्ष १ अर्ब ७८ करोड ५८ लाख ५३ हजार मूल्यबराबरको १७ लाख ८५ हजार ८ सय ५३ केजी माछा आयात भएको थियो ।खसीबोकाको भन्सार शुल्क कृषि सेवा शुल्कबापत ५ प्रतिशत मात्र लाग्छ । मासु व्यवसायीका अनुसार भारत उत्तर प्रदेशका विभिन्न सहरबाट खसीबोका आयात हुन्छ ।
६ दिनमा साढे १० हजार खसीबोका आयात
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै असोज महिनामा पहिलो सातामात्रै १० हजार ६ सय ४१ गोटा खसीबोका आयात भएको छ । पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट कार्यालय, कृष्णनगरका प्रमुख डा. अखिलेश पाण्डेका अनुसार ७ दिनमा कार्यालयमा १० हजार ६ सय ४१ खसीबोका नेपाल भिœयाउन अनुमतिका लागि पत्र आएको बताए ।
साउन महिनामा ८ हजार ६ सय १० तथा भदौमा २१ हजार १ सय ११ खसीबोका उक्त नाका हुँदै आएका थिए । अहिले असोजमा नेपालगन्ज नाका हुँदै आउने खसीबोका पनि कृष्णनगर नाका हुँदै भित्रिन थालेपछि आयात हुने खसीबोकाको परिणाम बढेको हो । कृष्णनगर नाका हुँदै भित्रिने खसीबोका काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, चितवन र कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा बिक्री हुने गरेको छ ।
खसीबोका दसैं भैरहवा बेलहिया नाका